Pterocarpus Macrocarpus -Myanmar Padauk
adminPlural:2ကွန်မင့်များ on Pterocarpus Macrocarpus -Myanmar PadaukPosted in Mix Categorized
Pterocarpus macrocarpus, or the Burma padauk, isatree native to the seasonal tropical forests of southeastern Asia: in Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand, and Vietnam. It has been naturalized in India and the Caribbean.
Pterocarpus macrocarpus isamedium-sized tree growing to 10–30 m (rarely to 39 m) tall, withatrunk up to 1.7 m diameter; it is deciduous in the dry season. The bark is flaky, grey-brown; if cut, it secretesared gum. The leaves are 200–350 mm long, pinnate, with 9–11 leaflets. The flowers are yellow, produced in racemes 50–90 mm long. The fruit isapod surrounded byaround wing 45–70 mm diameter, containing two or three seeds.
The wood is durable and resistant to termites; it is important, used for furniture, construction timber, cart wheels, tool handles, and posts; though notatrue rosewood it is sometimes traded as such. The seasonal padauk flowers bloom annually around Thingyan (April) and is considered one of the national symbols of Myanmar (formerly Burma).
Pterocarpus macrocarpus (Myanmar Padauk)
Pterocarpus macrocarpus (Burma padauk) သည်အရှေ့တောင်အာရှ၏ရာသီဥတုအပူပိုင်းသစ်တောများဖြစ်သောမြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့၏အပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိန္ဒိယနှင့်ကာရစ်ဘီယံတို့တွင် လည်းသဘာဝအလျှောက်ပေါက်ဖွှားကြသည်။
Pterocarpus macrocarpus သည်အလတ်စားအရွယ်ရှိသစ်ပင်ဖြစ်ပြီးအမြင့် ၁.၇ မီတာအထိပင်စည်နှင့် ၁၀-၃၀ မီတာ (ခဲသည် ၃၉ မီတာ) အထိကြီးထွားသည်။ ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ရွက်ကြွေသည်။ အခေါက်, flaky, မီးခိုးရောင် – အညိုဖြစ်၏ ဖြတ်လျှင်၎င်းသည်သွားဖုံးနီကိုထုတ်လွှတ်သည်။ အရွက်များသည် ၉-၁၁ လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့်အတူရှည်လျား။ အနီ၊ ပန်းပွင့်များသည်အဝါရောင်ဖြစ်ပြီး ၅၀ မှ ၉၀ မီလီမီတာရှည်လျားသော racemes ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ဒီအသီးသည်မျိုးစေ့နှစ်မျိုးသုံးမျိုးပါ ၀ င်သောအတောင် ၄၅ မှ ၇၀ မီလီမီတာအပြည့်ရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသီးတောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိတောက်သစ်သားသည်ကြာရှည်ခံပြီးအကြမ်းခံနိုင်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ပရိဘောဂများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသစ်များ၊ လှည်းဘီးများ၊ ကိရိယာလက်ကိုင်များနှင့်ပို့စ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ သင်္ကြန် (Aprilပြီ) တဝိုက်ရာသီအလိုက်ရာသီဥတုပန်းပွင့်များသည်နှစ်စဉ်ပွင့်လန်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးသားသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။
Photo: Pterocarpus macrocarpus leaves & flowers, collected Chonburi, Thailand. https://commons.wikimedia.org/wiki/User:JJLudemann
Hello Floral Lovers!
Crabapple Blossom Meaning, Popular Types, and Uses
2 thoughts on “Pterocarpus Macrocarpus -Myanmar Padauk”
MEHARG508 ကပြောသည် -
ဇန်နဝါရီ 5, 2021 ရက်နေ့ 11:08 မနက်
John Oo ကပြောသည် -
ဇန်နဝါရီ 5, 2021 ရက်နေ့ 12:47 ညနေ
Lovely Myanmar Padauk.